Somali - Ramsey-Washington Metro Watershed District
Biyaha tayo leh nolal tayo leh.
Degmada Ramsey-Washington Metro Watershed ayaa mas’uul ka ah ilaalinta iyo hagaajinta khayraadka biyaha iyo hannaanka deegaanka ee ku yaala bariga Ramsey County iyo galbeedka Washington County, Minnesota.
La shaqaynta 12 magaalo ee degmadeena, waxaan maamulnaa qiyaastii 65 mayloo laba jibbaaran oo ugu dambeyntii ku daadineysa Wabiga Mississippi, oo ay ka mid yihiin 20 lagood, shan il iyo in ka badan 1,000 dhul qoyan. Waxaanu kormeernaa tayada biyaha, maaraynaa hirka biyaha, dib u soo celinaa degaannada dabiiciga ah iyo bixinaa waxbarashada kala qaybinta biyaha ee bulshooyinka maxalliga ah.
Wixii Ingiriisi ah / Taageero Soomaali ah wac 651-412-9603
Kadib markii aad gasho code 129
Degmada Ramsey-Washington Metro Watershed
Telefoonka degmada: 651-792-7950
Saacadaha Xafiiska: 8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo
Booqo boggeena oo dhan rwmwd.org.
Kormeerka Barnaamijka Deeq siinta
Waxaanu bixinaa deeqo illaa $ 15,000 si aad u dhigtid mashaariicda maamulka biyaha ee gurigaaga. Kuwani waxaa ka mid ah beeraha roobka, dib u soo celinta xeebaha, abuurka hooyga, goobaha gawaarida la dhigto iyo habab kale oo caawiya kaas oo yareeyo socodka hirka biyaha. La xiriir Maamulaha Mashruuca Watershed Paige Ahlborg wixii war dheeraad ah.
Waxaan martigelinnaa dhacdadan qoyska bilaash ah bisha Juun sannad kasta ee Lagta Phalen Regional Park ee Saint Paul. Ku raaxeysta ul doon ku wadida, cayaaraha, muusikada iyo qoob ka ciyaarka, bandhigyada iyo waxyaabo kale oo badan oo ka mid ah goobaha madadaalada. Booqo baalkayaga WaterFest si aad wax badan uga baratid.
Guddiga La-talinta Muwaadiniinta
Guddiga La-talinta Muwaadiniinta waa koox mutadawiciin ah oo caawiya haga ama ka shaqeya asag oo annaga noosheegaya arrimahee muhiim u ah bulshadooda, iyo sida aan u horumarin karno barnaamijyadeenna. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka mid noqoto guddiga, fadlan la xariir Maamulaha Degmada Tina Carstens.